Mety hiatrika fiampangana heloka bevava ny Ben’ny tanànan’i Odessa taorian’ny nanehoan’ny mpiambina azy herisetra tamin’ny mpanao gazety iray tao an-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2019 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, 繁體中文, English
Ben'ny tanànan'i Odessa Gennadiy Trukhanov segondra vitsy talohan'ny nandroahan'ny mpiambina azy ilay mpitati-baovaon'ny Radio Svoboda, Mikhail Shtekel, tao amin'ny lapan'ny fitsarana izay nanomezany valan-dresaka an-gazety fohy. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Shtekel izay navoaka tao amin'ny Twitter.
Hanadihady ny ben'ny tanàna Gennady Trukhanov ny polisy ao Odessa noho ny “fanohintohinana ny fantontosan'ny mpanao gazety ara-dalàna ny asany” izay fandikan-dalana melohin'ny fehezan-dalana famaizana ao Okraina, taorian'ny zava-nitranga iray izay nahitana ny mpiambina azy naneho herisetra tamin'ny mpanao gazety iray tao an-toerana.
On December 27, Radio Svoboda journalist Mikhail Shtekel posed a question to Trukhanov at a press briefing, to which the mayor responded by pushing him away while his security proceeded to expel the journalist out of the building.
Ny 27 Desambra 2018, nametraka fanontaniana tamin'i Trukhanov nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ilay mpanao gazety ao amin'ny Radio Svoboda, Mikhail Shtekel, izay novalian'ity ben'ny tanàna ity tamin'ny fanosehana azy, nandroaka ilay mpanao gazety nivoaka ny tranobe kosa ny mpiambina azy.
Nandrakitra ny zava-nitranga rehetra tamin'ny fakantsary i Shtekel, ary namoaka ny lahatsary tao amin'ny Twitter taoriana kelin'izay. Ny Radio Svoboda izay mpampiasa azy moa dia ny Radio Free Europe ihany fa amin'ny teny Okrainiana :
Raha tokony hamaly ny fanontanian'i @radiosvoboda [Onjam-peon'ny Fahafahana amin'ny teny Okraniana] ny ben'ny tanànan'i Odessa Gennadiy Trukhanov sy ny mpiambina azy dia nanosika ahy no nataony ary nivoaka ny lapan'ny fitsarana tao Malinovskyi. Nanampy azy ireo tamin'izany ny polisy. Moa ve eo ambanin'ny andininy faha-171 izany sa tsia ry @NPU_GOV_UA [Polisim-pirenena] @MVS_UA [Minisiteran'ny Raharaha Anatiny ao Okraina] ?
Ny andininy faha-171 amin'ny fehezan-dalàna famaizana ao Okraina dia manondro ny heloka bevava amin'ny “fanohintohinana ny fanatontosana ara-dalàna ny asan'ny mpanao gazety,” izay ahitana ny fanagiazana tsy ara-dalàna ny fitaovana fitateram-baovao, ny fandavana ny fanomezana ny fahafahana miditra amin'ny fahazoana torohay sy ny maro hafa. Saziana handoa lamandy sy farafahabetsany telo taona an-tranomaizina ny fandikana izany.
Ny 29 Desambra 2018, nilaza i Shtekel tao amin'ny pejy Facebook-ny, fa noho ny fanampian'ireo mpisolovava azy dia nitory an'i Trukhanov, ny mpiambina azy, ary ny polisy izay nandray anjara tamin'ny herisetra izy tamin'ny heloka bevava mifandraika amin'ny Andininy faha 171 . Tamin'ny 2 Janoary 2019, nanamafy tamin'ny Detector Media ny polisin'i Odessa fa efa nanomboka ny fanadihadiana ity toe-draharaha ity izy ireo.
Ny fanevatevana ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny mpanao gazety
Tsy ity ihany no tranga vao haingana indrindra nahitana an'i Trukhanov na ny olona eo ambany fahefany nanao herisetra tamin'ireo mpanao gazety. Tamin'ny Jolay 2018, raha nanontany azy ilay mpanao gazety Bogdan Osinskyi hoe nahoana izy no niresaka momba ny vondrona mpandala ny tontolo iainana ho toy ny “kankana maitso” dia nalain'ity ben'ny tanàna ity ny findain'ilay mpanao gazety ary nikasa ny hamelaka azy tamin'izany izy .
Tamin'ny volana Aprily 2018, ilay mpanao gazety Britanika Andy Verity, izay tonga tany Odessa niaraka tamin'ny BBC mba hitatitra momba ny fanadihadiana kolikoly izay naha-voarohirohy ilay ben'ny tanàna, dia voatosika, nianjera, ary nodakan'ireo mpiambina an'i Trukhanov raha nanatona mba hanontany azy. Nandrakitra ny zava-nitranga rehetra tamin'ny fakantsary ny BBC .
Farany, talohan'ny fiafaran'ny taona 2018, nilaza i Trukhanov fa nanao “fanontaniana tsy misy dikany ” ilay mpikambana ao amin'ny Parlemanta Mustafa Nayem, mpanao gazety teo aloha.
Ankoatra izany, voampanga tamin'ny raharaha fanodikodinam-bola mifandraika amin'ny fivarotana tranobe iray tao an-tanandehiben'i Odessa izay fantatra amin'ny anarana hoe orinasa Krayan i Trukhanov. Nanomboka ny volana Oktobra 2018 teo ny fitsarana – ny resaka fohy nifanaovana tamin'ny mpanao gazety nahitana an'i Shtekel niharan'ny herisetra ny 27 Desambra 2018 dia taorian'ny fotoam-pitsarana momba ity raharaha ity.
Nahazo tsikera henjana ihany koa ilay ben'ny tanàna, anisan'izany ny tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra iraisam-pirenena, noho ny fihetsika ataon'ireo “mpiambina monisipaly”. Ireo dia mpiambina manokana nokaramain'ny tanàndehiben'i Odessa ao anatin'ny toe-javatra mampiahiahy ary efa voampanga ho nanatontosa fanitsakitsahana ny zon'olombelona maro, anisan'izany ny nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety.
Mety hirotsaka ho fidiana indray i Tchukhanov amin'ny taona 2020. Raha meloka eo anatrehan'ireo heloka bevava izay atrehiny anefa izy dia mety hiady hahazoany ny fahafahany manokana fa tsy hiady ho an'ny sezan'ny ben'ny tanànan'i Odessa.
Ny 30 Novambra 2018, nanolotra ny asany manokana tamin'ny endrika miabo i Trukhanov nandritra ny lanonana fanao isan-taona tao amin'ny lapan'ny tanànan'i Odessa. Ny hafanam-po toy izany dia inoana fa tsy itovian-kevitra amin'ireo mpanao gazety ao an-tanàndehibe, izay mihevitra ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ho vao mainka sarotra tontosaina kokoa.